နားဦးတည့်ရာ လေးဆယ် – Bob Dylan (Blowin’ In The Wind) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Music » နားဦးတည့်ရာ လေးဆယ် – Bob Dylan (Blowin’ In The Wind)	16
နားဦးတည့်ရာ လေးဆယ် – Bob Dylan (Blowin’ In The Wind)
Posted by မြစပဲရိုး on Aug 2, 2015 in Music | 16 comments
ဒီတစ်ခါ နားဦးတည့်ပိတ်ပွဲ လုပ်တော့မှာပါ။
နားထဲ ရောက်နှင့်ပြီး သီချင်း တွေ က အများသားဖြစ်နေလို့ အခက်တွေ့ရော။
ရွာထဲက ကောက်ရ ဆားလေး (အင်လောမဟုတ် ) ရဲ့ မှတ်ချက်ကြည့်ပြီး တစ်ပုဒ် တော့ ထွက်လိုက်သေး။
အမေဆိုမှတော့ တာဝန်ကျေအောင် ဆူရ ဆဲရ တာ မဟုတ်လား။
သို့ပေသည့် သူ့ကို အဲဂလို ပြောရကောင်းလားဆိုပြီး ငိုချင်းချနေမှဖြင့် ရေကြီး တာ ပိုပြီး ကြီး သွားနိုင်သမို့ မပြောတော့ပါဘု။
ဒါကြောင့် လောလောဆယ် ခေါင်းထဲ ရောက်လာတဲ့ သီချင်း နဲ့ဘဲ ပိတ်ပွဲ လုပ်လိုက်ပါတယ်။
သီချင်း က “Blowin’ In The Wind” ဖြစ်ပြီး တေးဆိုသူက “Bob Dylan” လို့ ခေါ်ပါတယ်။
. တေးရေးသူ ကလဲ သူကိုယ်တိုင်ပါဘဲ။
အသက် ၇၄နှစ်ရှိနေပေမဲ့ အခုထိ သီချင်းတွေ ဆိုနေဆဲပါ။
Folk, Rock, Folk rock စတိုင် သီချင်း တွေ ဆိုပါတယ်။
အစပိုင်းမှာ သူက ဂျာနယ်လစ် ပေမဲ့ နောက်ပိုင်း လူ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှု တွေ၊ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ မှာပါဝင်ပြီး အဲဒါတွေ အတွက် သီချင်းတွေ ရေး/ဆို လုပ်ခဲ့တာပါ။
အခု ပြောတဲ့ “Blowin’ In The Wind” ကလဲ အဲဒီ လှုပ်ရှားမှုတွေ အတွက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။
သီချင်း စတိုင်က “Folk” လို့ ပြောရမလားဘဲ။
. နှစ် ၂၀နီးပါး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲ ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ သီချင်းလို့ ဆိုပါတယ်။
သီချင်းထဲ မှာ မေးခွန်း လေး တွေ မေးထားပြီး။
အဲဒီမေးခွန်းလေး တွေ ရဲ့ အဖြေ က “blowin’ in the wind” လေထဲမှာ လွှင့်မျောနေပါတယ် လို့ ပြောထားတာ လေးပါ။
အဲဒီ အပြောကဘဲ နှစ်ခွ ပါ။ နှစ်မျိုး တွေးလို့ ရပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ်(၁) က အဲဒီအဖြေတွေ ဟာ ကိုယ့်အနီးအနား မြင်နိုင်တဲ့ လက်တကမ်းဘဲ ရှိတယ်၊ ကြိုးစားရှာတတ်ရင်၊ ဂရုပြူလိုက်ခဲ့ရင် မြင်နိုင်တယ်။
အဓိပ္ပါယ်(၂) က အဲဒီအဖြေတွေ ဟာ လေလိုဘဲ ဖမ်းကိုင်ဆုတ်လို့ မရလို့ အဖြေမဖော်နိုင်ပါ။
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ထင်သလိုသာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လိုက်ပါ။ နှစ်မျိုးလုံး မှန်နိုင်ပါတယ်။ lol:-)))
အဲဒီလို ဖြစ်အောင်ဘဲ သီချင်းရေးသူ က ဖန်တီးခဲ့တာထင်ပါရဲ့။
* ဒီတော့ ပြောချင်တာ က
* လောကကြီး ထဲ အတိအကျ အဓိပ္ပါယ် မဖော်နိုင်တဲ့
* Double meaning လိုမျိုး ဖြစ်နေတာ တွေ အတွက် တော့
* ရန်မဖြစ် ချင်ကြပါနဲ့။
* စိတ်အညစ် အနွမ်း မခံကြပါ နဲ့။
* တစ်ယောက် အဓိပ္ပါယ်ပြန်ပြီး ပြောလိုက် တဲ့ အဖြေ က ကိုယ့်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် (အဖြေ ) နဲ့ ကွဲ နေခဲ့ရင်
* ကွဲ နေတတ်တဲ့ သဘောရှိကြောင်းလေး ကို အသာလက်ခံ ပြီး
* ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ကို ရှေ့တန်းတင်ပေးကြပါလို့
* ပြောရင်း …………
* နားဦးတည့် အစီအစဉ် ကို ပိတ်ပွဲ ကျင်းပ လိုက်ပါတယ်။
Bob Dylan – “Blowin’ In The Wind”
မြစပဲရိုး says: Yes, and how many ears must one man have
ဇီဇီခင်ဇော် says: တစ်ယောက်ထဲတောင် သဘောထား အမျိုးမျိုး ကွဲနေကြတာကို။
Ma Ma says: နားဦးတည့်အစီအစဉ်တွေဖတ်ပြီး မလတ်ကို နေရာတိုင်းမှာ ၀င်ဆန့်နိုင်သူလို့ စိတ်ထဲကတွေးမိနေတာ။ နားဦးတည့်ရာပိတ်ပွဲဆိုတော့ အလျဉ်းသင့်ရင် လာပါအုံး။
စကားလုံးတွေ စိတ်ထဲမှာ သိမ်းထားရရင် ပင်ပန်းတယ်နောာာာာာာာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုလတ်ကြီး ရဲ့နားဦးတည့်ရာက ဘိုလို
ကျနော်က မြန်မာသံလေးတွေနားထောင်ကြမယ် ဖေစ်ဘုတ်ဂရု မှာ သီချင်းတွေရှာပြီး တင်ပေးနေတာကြာပြီ
အဲမှာ တိမ်မြုတ်နေတဲ့သီချင်းတွေ တင်ပေးတာ နားထောင်ချင်တဲ့သူ ပြန်နားထောင်လို့ရအောင်
အချို့သီချင်းအဟောင်းအကောင်းလေးတွေကို ပြန်ဆိုတေးထုတ်လုပ်သူများ မျက်စေ့ကျသွားရင်
တေးရေးသူမှာ ပြန်ရောင်းလို့ ရအောင် လုပ်ပေးတာပါ
တစ်ခါ လောက် အလည်လာကြည့်ပါလား
@QUIL@ says: ဘော့ဒလင် လား…
သူရှင်သန်နေဆဲမှာ လူဖြစ်ခွင့်ရတာ… ဆုလာဘ်တခုဗျ…
မြစပဲရိုး says: Thanks. :-))))
@QUIL@ says: ကျေးဇူးတင်ရင် … သားအမိတော်ရအောင်ညော်…..
မြစပဲရိုး says: Yes.. but not (in law). lol:-))))
@QUIL@ says: ဘော့ဒလင် အကြောင်းဆက်ပြောတာပေါ့…
ဘာတဲ့… အမေရိကမှာ နိုင်ငံတော်သီချင်းထက်တောင် လူပို ရသေးသတဲ့…
ရှူးတိုးတိုး….. အိုင်ခူးမကြားစေနဲ့… သူ အဲ့သီချင်းမရတာ သေချာတယ်….
စကားမစပ် ဘဘဂျော့် ကလည်း ဘော့ဒလင်န် အသီးစွဲညော်…
ဘော့် ထားခဲ့တဲ့ ယဲဇားဟောင်းတောင် ကောက်ကတ်တွဲသေးသတဲ့…..
မြစပဲရိုး says: တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် – သူ့ အကြောင်း ဒီ မှာ ပါလာနေတယ်။ ဖတ်ချင်ရင်ပါ။ သိပြီးသားတွေလဲ ဖြစ်နေလောက်ပါတယ် ဆရာလေး က။ :-)))
@QUIL@ says: ဘာဆရာမှ မလေးဘူး…
မြစပဲရိုး says: ဇီဇီလေး
ကိုယ့်တစ်ယောက်ထဲ သဘောထားကွဲ တာ တော့ ခွေးလွှတ်နိုင်ကြတာ မဟုတ်လား။
ဒီနေ့ တိတ်နေပါ့လား။ အလုပ်ရှုပ်နေထင်ရဲ့။ :-))
ဒီမှာက ဖတ်စရာ သတင်း ဆောင်းပါး တွေ ကို အလွယ်ရှာ ဖတ်လို့ ရတော့ ဟို ပါ ဒီပါ ပေါ့။
. ယောင်၆၀ lol:-)))
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါလဲ ကော်ပီ မြန်မာ သီချင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
မူရင်း ကို အရင်က မသိပါဘူး။ တူးတူး ရဲ့ မြန်မာသီချင်း “ချိုမြိန်ဒုက္ခ” ကို ဘဲ ကြားဖူးတာ။
မူရင်း ကို နားထောင်ပြီးချိန် မူရင်းရေးသူ သီချင်းရေးဆရာ ကို အားနာလိုက်တာ။
အရမ်းကအဓိပ္ပါယ်ရှိလွန်းတဲ့ စာသား တွေ ကို ကျွန်မတို့ မြန်မာ ကော်ပီ သီချင်းရေးဆရာ က လစ်လျူပြု ပြီး သာမာန်အချစ်သီချင်း တစ်ပုဒ် အဖြစ်ဘဲ ပွါးလိုက်ခဲ့တာ ကိုပါ။
ဒါကြောင့် ပို့စ် ထဲ ထည့်မပြောခဲ့တာ။
ကျွန်မ ဂေါက် တာလဲ ပါမှာပါ။
ဒီမှာ တူးတူး ရဲ့ ကော်ပီသီချင်း။
ဇီဇီခင်ဇော် says: စနေ/တနင်္ဂနွေက ရေဘေး အလှူအတွက်ရော အိမ်မှာ ရော အလုပ်ရှုပ်လို့။
နောက် အမတ်လောင်းရွေးပွဲ ဟိုပြောဒီပြောတွေကို ဒေါသဖြစ်လို့ရော။
ဒီ သီချင်းက တင်ဇာမော် ပြန်ဆိုတာ ကို သများ ပြန်ဆိုထားသေးတယ်။
တောင်ပေါ်သား says: အရီးရဲ့ ဘိုသီချင်းတွေကို ကျနော် မသိဘူးရယ်
အတော်ညံ့ပါ့နော် ၊ ဒါနဲ့ ဘာလို့ဆက်မရေးတော့တာတုန်း ၊
မြစပဲရိုး says: ဇီ ကလေး
ရေဒီယို ၊ တီဗီ လာသမျှ မြန်မာသီချင်း မပါတော့ နီးရာ နဲ့ ပျော်ရတာပါ့။
သို့ပေမဲ့ ကိုယ့် မြန်မာသီချင်း တွေကို လဲ အမြဲ လွမ်းတတ်ပါတယ်။
နားဦးတည့် က လုပ်စား လေ ကိုမျိုး ရဲ့။
ပွိုင့်ပြည့် ခါနီး မို့ ရပ်မှ ဖြစ်မယ်။ :-)))
ဟေသီ says: နှမျောတော့ နှမျောစရာ။ ဒီက ဖတ်လို့ ကောင်းလို့ တစိုက်မတ်မတ် ဖတ်မယ်ပဲ ရှိသေးတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.